Juventus oo diyaarsatay talaabo cusub ay ku dooneyso in Manchester United ay dib kaga soo ceshato Paul Pogba - Wargane News
Home Sports Juventus oo diyaarsatay talaabo cusub ay ku dooneyso in Manchester United ay...
Warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa shaacisay maanta oo Talaado ah in Juventus ay soo bandhigtay dalab ay ku dooneyso inay dib kaga soo ceshato Paul Pogba kooxda Manchester United.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ayaa shaaca ka qaaday in Juventus ay diyaar u tahay in Miralem Pjanić ay ku badalato laacibkeedii hore ee Paul Pogba.
Paul Pogba ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ka sameeyay koobka aduunka 2018 ee dhawaan lagu soo gaba gabeeyay dalka Russia.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Juventus ay go’aansatay inay Pogba ku soo celiso magaalada Torino si ay u dhaqaajiso khadkeeda dhexe, islamarkaana ay u sameyso koox awood badan ee u dagaalami karta ku guuleysiga tartanka Champions League.
Juventus ayaana diyaar u ah in Manchester United ay ku wareejiso laacibka reer Bosnia ee Miralem Pjanić si ay ugu qanciso heshiiskan.
Sida la fahansan yahay Pogba ayaa diyaar u ah inuu ku laabto kooxdiisa hore ee Juventus, laakiin wuxuu shuruud kaga dhigay in ugu horeyn ay arintan ka wada hadlaan maamulka labada dhinac si loo dhameystiro heshiiskan.
BBC Oo Su’aalo Shakhsiyaddiisa Ah Waydiisay Madaxweyne Biixi